Eeyyeen seera kamiinuu tessoo malee lafa hin qabu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsEeyyeen seera kamiinuu tessoo malee lafa hin qabu.
#Bishooftuu: Ebla 15/2019 Magaalaa Bishooftuutti guyyaa gootota Oromoo warreegamaan haala kanaan kabajame.
OMN: Qophii Addaa:- Guyyaa Gootota Oromoo ilalchisuun turtii Hayyu Duree ABO Obbo Galaasaa Dilboo faana taaasifame.(Eebla 15, 2019)
#GGO Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo Dirree Qabsootti Ebla 15 GGO Kabajaa jira.
ONN: Eebila 15,2019-Walisoo
Guyyaa kaleessaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO mooraa Xoollaay jiraniif qaamni mootummaa summii laate.
Waraanni Bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa’uudhaaf waamicha Abbootii Gadaa jedhamuun baatilee muraasa dura lallabaamaa tureen shiraan Qawween isaa irraa hiikamee waraana Raayyaa ittisa biyyaa mootummaaf laatamuun kan yaadatamuudha. Waraana kana lakkoofsaan 1000 kan taa’aan maqaa Koree Teknikaa jedhuun jalqaba Qawwee keessan Ganduma keessa sochootan gala bakka biroo hindeemu jechuudhaan, akkasumas leenjii fudhattanii sochii karaa nagaatti dabalamtu kaan keessan ammoo humna addaa waraana Oromiyaa tiksu taatu jechuudhaan galchan.
Waraanni kunis gaafuma galurraa qabee Waraanni Mootummaa itti roorrisuu jalqabe. Qawween isaaniis Gandaa keessaa hinba’u uummata Oromoo tiksa kan jedhame sun hafee ittuu Makalaakiyaa waraana Raayyaa ittisa biyyaa uummata keenyatti Roorrisaa jiru waraana yakka gudeeddii dubartii Oromoo irratti, yakka ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti akkasumas ati deggaraa ABO ti jechuun mana uummata keenya Oromoo irratti gubaa Kan jiruuf Qawween kun laatame.
Ibsa dhimma kanaan wal qabatuun ajajaan Komaandi post Lixa Oromiyaa tibba sana akka Komaand Post dhaan Qawwee kana WBO irraa hiikkataniitti miidiyaaf ibsa kennaa turuun nii yaadatama.
Waraana kana mooraa Leenjiin jedhames hatuudhaan gara mana hiraarsaa Xoollaay kan waggootaaf qabsaa’ota kitila nyaatee lafee qabsaa’ota Oromoo irra dhaabbataa jiruutti dabarsan. Ergasiis qabiinsa irraa qabee hanga Xiinsammuu miidhutti WBO mooricha galetti roorrisuudhaan Waraanni Mootummaa gidiraa hammaataaf saaxile.
Guyyaa kaleessa ganama ammoo keessuma bahuudhaan waraana kanaaf shaheettii dabalanii summii laataniifii miidhaa guddaaf saaxilan. Waraanni WBO moorichaas amma 400 ol kan ta’an Walisoo keessatti yaalamaa jiraachuu Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof miseensonni WBO kunneen gabaasaniiru. Dhimma kanaan wal qabsiisuudhaan Uummatni Oromoo Walisoo guyyaa kaleessaa hiriira bahuudhaan gochaa mootummaan waraana isaa WBO irratti raawwate balaaleffachaa oolan.
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo gabaase